Maxay Poland Muslimiinta ku maagtay?! (3 qodob oo mudan in la milicsado) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxay Poland Muslimiinta ku maagtay?! (3 qodob oo mudan in la milicsado)
Maxay Poland Muslimiinta ku maagtay?! (3 qodob oo mudan in la milicsado)
(Hadalsame) 10 Maarso 2022 – Islaam nacaybka Poland heerka uu gaarsiisan yahay waa aynu ka wada dheragsannahay oo faallo dheer u ma baahna, midda se iswaydiinta mudani waxay tahay maxaa islaamku ama muslimku u dhibay Poland oo gaarsiiyay nacaybka heerkaas ah? Runtii waa su’aal in badan la iswaydiiyay ilaa haddana aan jawaab la isku raacsan yahay loo helin.
Islaamka nacaybka Polish-ku waxa uu gaaray heer dadka dalkaasi oo tiradoodu tahay ku dhawaad 40 milyan aaminaan in tirada muslimiimta Poland ku nooli yihiin 2.6 milyan ayada oo runtu tahay in musliinta Poland ku nooli aysan ka badnayn 40,000 oo ruux.
Tan iyo 2015 markii xukunka Poland gacanta u galay xisbiga midigta ah ee loo yaqaan Law and Justice Party waxaa sare u kacayay shisheeye nacaybka Poland gaar ahaan musliinta. Haddaba muslim nacaybka Poland ee uu shidaalinayo xisbiga LJP waxa aan oran karna waxaa u sababa dhawr sababood oo kala ah:
1 – Bartii-aqoonnimo
Poland waa dal diin ahaan iyo dad ahaanba homogeneous ah, 98% dadka Polish-ku waa Polish halka diin ahaan 88% ay yihiin Roman Catholic. Sidaas darteed tani waxa ay sababtay dulqaad yari iyo bartii-aqoonnimo maadaama aysan dadka Polish-ku la dhaqmin la na macaamilin dadyow qowmiyad ahaan iyo diin ahaan ka duwan. Yacni waa dad xirxiran.
2 – Taariikh macmal ah
Xagjiriinta Polish-ku waxa ay aad afka ugu adkeeyaan in Poland weligeed ahayd darbi wayn ee Kirishtaanka Yurub difaac uga ah Islaam duullaan ah. Waxa ay aad u buunbuuniyaan macrakadii Vienna ee sannadkii 1683 dhexmartay Imbaraaddooroyaddii Cusmaanida (Ottoman Empire) iyo isbahaysigii dawladihii yaryaraa ee Yurub kuwaas oo boqortooyaddii Poland ka mid ahayd. Dagaalkaas oo Cusmaanida looga adkaaday waxaa hoggaaminayay boqor Polish ahaa oo la oran jiray John III Sobieski.
Inkasta oo dagaalkaas oo boqorka Poland abaanduulaha ka ahaa joojiyay isfidintii Cusmaanida ee Yurub haddana in Poland difaaca Yurub iyo Kirishtaanka ahayd waa kutirikuteen aan sal iyo raad lahayn, waayo, haddii la isbarbardhigo dagaallada Poland la gashay muslimka iyo kuwii ay la gashay Kirishtanka waxa aan oran karaa 99% sooyaalka dagaallada Poland waxa uu waranka u sitay Kirishtaan kale ilaa Poland ay gaartay in khariidada adduunkaba laga tirtiro cid kale na ka ma tirtirin ee waxaa ka tirtiray dawlado Kirishyaan ah. Qodobkaan waxa aan ku faahfaahin doonaa qaybta 2-aad oo aan uga hadli doonno taariikda Poland.
3 – Argagixiso la dirir iyo awrkacsi
Arrinta kale ee shidaalinaysa Islaam nacaybka Poland waa dagaalka Maraykan hormuudka ka yahay ee loogu yeero argagixiso la dirirka dagaalkaas oo si gardarro loogu beegsaday loogu na burburiyay dawlado iyo ummado badan oo islaam ah.
Dagaalladaas Maraykanku galay sida kii Afghanistan iyo Ciraaq ba Poland ciidamo ayay u dirtay. Waxa kale oo dagaalkaas abuurmay dhaqan foolxun oo warbaahinta reer galbeedku si fool xun ugu beegsadaan musliinta oo dhan aadna ugu suuradxumeeyaan.
Taasi waxa ay dalal badan Yurub iyo reer galbeed ah ka abuurtay islaam nacayb baahsan. Sawirkaas xun ee dadyowga Yurub iyo Galbeedka oo dhan laga siiyay Islaamku waxa uu noqday arrin siyaasiyiinta qowmiyiintu ku baqamaalaan dadyowga warbaahintu maskaxdoorisay.
Islaam nacaybka iyo shisheeye diidnimadu waa aaladda ugu fudud ee ole’olayaasha doorashooyinka dadweynaha lagu abaabulo kursigana lagu fuulo.
Yeelkeed’e, Islaam nacaybka Poland waxa lagu tilmaami karaa heer faashiistanimo (fascism).
La soco qayb 2-aad idanka Eebbe…
W; D: Cali M Diini
Previous articleDonnarumma iyo Neymar oo xalay ku sigtay inay isu gacan qaadaan!
Next articleRASMI: Xulka Talyaaniga oo u wareegaya shirkadda Adidas kaddib sanado badan oo Puma qalabaynaysey